‘सांसद अपहरणकारी’ महेशबाट ‘सांसद व्यवस्थापक’ महेश « रिपोर्टर्स नेपाल
(Thursday 17th June 2021)
‘सांसद अपहरणकारी’ महेशबाट ‘सांसद व्यवस्थापक’ महेश
प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार
काठमाडौं, ३१ वैशाख । २०७७ साल १० वैशाखको दिन । महोत्तरी पुगेर नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले तत्कालीन समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद डा.सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौं लिएर आए । उद्देश्य थियो समाजवादी पार्टी फुटाउने ।
महेश बस्नेतको साथमा सांसद किसान श्रेष्ठ र पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाल पनि थिए । यादवलाई काठमाडौंको होटलमा राखियो । तर, उनी भोलिपल्ट विहान त्यहाँबाट निस्किए । यादवले आफूमाथि अपहरणको आरोप लगाए । बस्नेतसहित तीनजनामाथि अपहरणको आरोप लाग्यो । प्रहरमिा उजुरीका लागि गए ।
सुरेन्द्र यादव अपहरणमा परेको भनिएको घटनाले समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकताको ढोका खोल्यो । ११ वैशाखमा दुवै दल एक भए । त्यसपछि अपहरणको उजुरी गर्न बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव मात्र नभई राजेन्द्र महतो समेत मिसिए । बस्नेतसहित तीनजनामाथि अपहरणको उजुरी दर्ता गर्न पुग्ने अग्रपंक्तिमा महतो पनि थिए ।
डा. सुरेन्द्र यादव अपहरणको आरोप लगाउँदै महेश बस्नेतसहित तीनजनाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ताका लागि पुगेका राजेन्द्र महतो
२०७७ साल ३० वैशाखको दिन । महेश बस्नेत डोलेश्वरको रिसोर्टमा जसपाका १३ सांसदहरुको साथमा रहे । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहितका १३ सांसदलाई डोलेश्वर पुर्याएर राति अबेरसम्म खानपान गराउने व्यवस्थापन महेश बस्नेतले नै गरेका थिए ।
बस्नेतको छेवैमा राजेन्द्र महतो बसेको तस्बिर समेत सार्वजनिक भएको छ । ठिक एक वर्ष अघि अपहरणको आरोप लागेका बस्नेत यसपटक जसपाका १३ सांसदको डोलेश्वर बसाईंका व्यवस्थापक भए ।
जसपाका सांसदहरुसँग महेश बस्नेत । तस्बिर साभारः नेपाल प्रेस
ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन महेश बस्नेतले १३ सांसदलाई डोलेश्वरमा व्यवस्थापन गरेको खुलिसकेको छ । यसमा उनी सफल पनि भए ।
यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका जसपा नेता डा.बाबुराम भट्टराईले पंकज राईको ट्वीटलाई रिट्वीट गरेका छन् । उक्त ट्वीटमा भक्तपुरको रिसोर्टमा केही जसपा सांसदहरुको सुरक्षामा अहोरात्र खटिनुभएका मधेसका मसिहा कामरेड महेश बस्नेत ! लेखिएको छ ।
पंकज राईले लेखेका छन्ः अब केही समय देशको सम्पूर्ण ध्यान सत्ता राजनीतिबाट कोभिड-१९ नियन्त्रणको अर्थ-राजनीतिमा केन्द्रित होऊॅ। तत्काल विभिन्न तहका सरकार र निजी क्षेत्रको संयोजनमा पर्याप्त अक्सिजन उत्पादन/वितरण,बेड/उपकरण,जनशक्ति,खोप आदि व्यवस्थापन युद्धस्तरमा गरौं! जनताको जीउज्यान रहे राजनीति हुॅदैगर्ला!
विपदमा खटिन केन्द्रको आदेश पर्खनु पर्दैन: नेपाली सेना
काठमाडौँ, २ असार : नेपाली सेनाले सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा बाढीपहिराका जोखिममा परेका नागरिकलाई उद्धार गरेको
‘खोला केही समय थुनिएर मेलम्चीमा एक्कासी बाढी गएको हुनसक्ने’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २ असार । मेलम्चीमा कसरी भीषण बाढी गएर बजार नै डुबानमा पर्यो भन्नेबारे अध्ययन
झलनाथ खनालले ओली खेमाको पनि मत जिते, स्वास्थ्यलाभको कामनाको ओइरो
काठमाडौं, २ असार । स्वास्थ्यलाभ गरी फर्कने विश्वासका साथ पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नयाँ दिल्ली प्रस्थान
काठमाडौँ, २ असार । आज देशभर २८ सय २८ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । थपिएका
आज ३०८२ जना कोरोना संक्रमणमुक्त
काठमाडौं, २ असार । २४ घन्टामा आज ३ हजार ८२ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन्
२४ घन्टामा संक्रमणबाट ५२ जनाको मृत्यु
काठमाडौं, २ असार । कोरोना संक्रमणबाट आज थप ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै
काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक भोलि , के के छन् एजेन्डा
काठमाडौं, २ असार । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भोलि बस्ने भएको छ । पार्टी
भारी अंकले नेप्से घट्दा १५ अर्बको कारोबार
काठमाडौं, २ असार । शेयर बजारमा आज भारी अंकले गिरावट आएको छ । साताको कारोबारको
काठमाडौं, असार ३ । मनसुन शुरु भएसँगै देशभर बढेको वर्षाका कारण जनधनको क्षति हुने क्रम